Oniversite Mahajanga - Wikipedia
Teny filamatra "Discipline - Cohésion - Excellence"
Filoha Emmanuel Andrianony Rakotoarivony
Isan'ny mpianatra 5000
Ny Oniversite Mahajanga dia sekolim-panjakana ambaratonga ambony, miorina ao Mahajanga renivohitra faritra Boeny any amin'ny faritra avaratra andrefan'i Madagasikara no misy azy.
2.2 Tsy miankina
3.1 Taona 2009 - 2010
3.2 Taona 2014
4 Lisitra sampam-piofanana
Naorina tamin'ny taona 1977, ny sekoly mianatra momba ny fahasalaman'ny nify na l'École supérieure de chirurgie dentaire (ESCD) no nisokatra voalohany tamin'izany. Ny Profesora George Rahoelina Rakotoarivelo no filoha nitantana ny Oniversite Mahajanga voalohany. Ny taona 1982 teo no nisokatra ireo sampana hafa toy ny sokajy fianarana momban'ny fahasalamana ankapobeny na médecine générale sy ny siansa natoraly ka ireo sampana roa ireo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taona 1983 tao Mahajanga ihany.
Ny Oniversite Mahajanga  dia ahitana sokajy roa miankina :
Siansa Natoraly (Biolojia, tontolo iaina, fambolena, fiompina, ...) na "Faculté des sciences"
Betsaka ny sokajim-piofanana izay andoava-mbola hita ao amin'ny Oniversite Mahajanga :
Institut Biologie Appliquée (IBA)
École de Langue et de Civilisation (ELC)
Taona 2009 - 2010Hanova
Ny taona 2009, nisy ny fitokonan'ireo mpianatra nitaky vatsim-pianarana, tamin'ny taona 2010, dia natao ny fifidianana filoha vaovao dia ny Profesora Rabesa Zafera Antoine no lany hitondra ny Oniversite Mahajanga.
Nanomboka ny taona 2010 no nitondran'ny Profesora Rabesa Zafera Antoine, niroborobo ny fandrosoan'ny Oniversite Mahajanga, nitombo ny sampam-pianarana. Taty amin'ny taona 2014 dia ravana avokoa ireo foto-drafitr'asa natao ary tapaka ny famatsiam-bola avy any ivelany. Akehitriny dia anatin'ny krizy sady fitondrana tetezamita tanteraka ny Oniversite Mahajanga.
Miankina amin'ny fanjakana
Tsy Miankina amin'ny fanjakana
Faculté des médecines Institut Universitaire de Gestion et de Management (IUGM)
Faculté des sciences Institut Biologie Appliquée (IBA)
((fr)) Trano kala
↑ Agence universitaire de la Francophonie (AUF), « Fiche de l'université de Mahajanga sur le site web de l'AUF », auf.org. Novangiana tamin'ny 9 janvier 2013
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Oniversite_Mahajanga&oldid=815983"
Dernière modification le 18 Jiona 2018, à 17:02
Voaova farany tamin'ny 18 Jiona 2018 amin'ny 17:02 ity pejy ity.